- लोकतन्त्रको रक्षाका लागि तरुण दल सदैव लडिरहनेछः अध्यक्ष जितजंग बस्नेत
लोकतन्त्रको रक्षाका लागि तरुण दल सदैव लडिरहनेछः अध्यक्ष जितजंग बस्नेत
नेपाली कांग्रेसभित्रको भ्रातृ संगठनको रुपमा रहेको नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष हुन् जितजंग बस्नेत । लामो समयसम्मको विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिंदै आएका उनी एक सफल नेतृत्वकर्ता र युवा नेता समेत हुन् । नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट आफ्नो पाइला सुरु गरेका बस्नेत एक जुझारु, कर्मशील, क्षमतावान् र स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन् । नेविसंघभित्र रहेर काम गर्दा सधै विद्यार्थीको हक हित र शिक्षाक्षेत्रमा रहेका बेथितिहरु हटाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने भनाइ बुलन्द गर्दै संगठन र विद्यार्थी राजनीतिलाई सफल रुपमा अगाडि बढाएका उनी पछिल्लो समय तरुणदलका अध्यक्ष बनेका छन् ।
२०७३ साल कार्तिक ३० गते पोखरामा भएको चौथो महाअधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेपाल तरुण दलको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी संगठन र पार्टीभित्र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् ।पछिल्लो समय पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्य हुनुपर्दछ, नेताहरु सबै एक ठाउँमा उभिएर देशमा नेपाली कांग्रेसको साख अझै बलियो बनाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेका उनी पार्टी र संगठलाई अझ सशक्त बनाउन लागिपरेका छन् ।
तरुण दललाई देशव्यापी रुपमा अझ सशक्त बनाउन जिल्ला सभापतिस्तरीय भेलादेखि केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय निकायसम्म प्रशिक्षण र गोष्ठीहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तरुणदलको मूख्य भूमिका देशमा सुशासनको थालनी गर्दै भष्ट्राचार अन्य गर्नुपर्ने, सरकारले गरेका गलत कार्यको सदैव खण्डन गर्दै सकारत्मक बाटोमा हिंड्न बाध्य पार्ने योजना रहेको बताउने अध्यक्ष जितजंग बस्नेतसँग नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र तरुण दलको भूमिका विषयमा नेपाल ताराका लागि सुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानी ।
प्रश्नः पछिल्लो नेपाली राजनीतिलाई नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठका हिसाबले कसरी लिनुभएको छ ?
पछिल्लो राजनीतिकलाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो पार्टी बन्यो, पहिलो पार्टी बन्नुपर्ने त्यो भएन । नेपाली जनताले हामीलाई पहिलो पार्टीमा नबस तिमीहरु प्रतिपक्षमा बस भनेर म्यान्डेड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्न नसक्नुमा कमजोरीहरु छन् । त्यसलाई आगामी दिनमा परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । तीन तहका चुनाव र संविधानको कार्यन्वयन कांग्रेसले गरायो यो कांग्रेसको पछिल्लो देशलाई निकास दिने कुरामा महत्वपूर्ण योगदान हो । अहिले वाम गठबन्धनको सरकार छ । उहाँहरुको झण्डै दुइतिहाई मत छ, अर्को कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि भूमिका खेल्नुभयो त्यो नै यो सरकारको पहिलो कमजोरी थियो, संविधानविपरीत थियो । यो संविधानले एउटा कुरा चिन्छ, त्यो हो संसद र संसदीय दलको नेता तर कुनै पार्टीको सभापतिलाई चिन्दैन । जसरी राष्ट्रपतिसमक्ष दुई नेता ओली र प्रचण्ड गएर हाम्रो दुईतिहार्इ मत छ प्रधानमन्त्रीको शपथ दिनुहोस् भनेपछि संसदीय प्रक्रिया नै गतल ढंगमा अगाडि बढेको हो । राष्ट्रपति भण्डारी जसरी तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष जस्तै गरी शपथ र सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुभयो त्यसबाट नै वाम सरकार एकलौटी रुपमा चल्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
यसअघि देउवा सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरु खारेज भएका छन् त्यो एकदमै गलत छ । जसरी देउवा सरकारले पठाएका ३ वटा व्यक्तिको नाम खारेज गरियो त्यो संसदीय प्रकृया होइन । राष्ट्रपतिले अयोग्य नै भएमा मन्त्रिपरिषद्मा सच्याउनका लागि पठाउनु पथ्र्यो, त्यो भएन । यसरी यो सरकारले गल्तीमाथि गल्ती गरिरहेको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई कुल्चिंदै केही व्यक्तिहरूलाई जेल मुक्त गरियो त्यो संविधान संवत् होइन र यो अदालतमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । स्वतन्त्र न्यापालिकामाथि यसरी हस्तक्षेप हुनु भनेको समग्र नेपाली र संविधानको अवहेलाना गर्नु हो । यसले गर्दा अहिलेको ओली सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको प्रष्टसँग देखिएको छ । संविधान, न्यायपालिकालाई कुल्चिँदै सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयासमा यो सरकार लागेको छ । यस्ता क्रियाकलापले ओली सरकार नाङ्गिंदै गएको छ, भष्ट्र हुँदै गएको छ । राष्ट्र बनाउने कुरा जसले बनाए पनि हुन्छ । केपी ओलीलाई जनताले मत दिएका हुन्, उहाँले काम गर्नुपर्छ, त्यसमा तरुण दलको सधै सहयोग रहन्छ । तर परिवर्तनका नाममा संविधानमाथि कुल्चिन पाइदैन र लोकतन्त्र प्रति प्रहार गर्ने कुरामा हाम्रो सहयोग रहँदैन यसका लागि आवाज अठाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र नेपाल तरुण दलले यसको घोर विरोध गर्दै जनतालाई सुसूचित गर्नेछ ।
प्रश्नः मधेस मुद्धाहरु फरक तरिकाले आगाडि बढेको देखिएको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हिजो जसरी तत्कालीन एमाले सरकारमा हुँदा तराईका जनताहरुको माग सम्बोधन गरौं उनीहरुलाई पनि साथ लिएर जाउ भन्दा नमानेको होइन र ? तराईमा चुनाव गर्न सकिंदैन भन्ने त्रास आमनेपालीमा थियो, त्यो नेपाली कांग्रेसको सरकारले सफल बनायो । हिजोको दिनमा तराईका जनता र दलहरुले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गरौं भन्दा नमान्ने तत्कालीन एमाले हो, अहिले आएर आफ्नो सरकारलाई बलियो बनाउने र सर्वसत्ता लाद्ने नाममा मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्छौं भनेर फोरमलाई सरकारमा लगेका छन्, त्यसले मधेसका मुद्दा सम्बोधन हुँदैन र तरार्इका जनताको भावना समेटिंदैन । हिजो संसदमा वर्ष दिन संशोधन विधेक अड्किरहँदा बाहिर ल्याउन नदिने एमाले नै हो । जसरी कांग्रेसको सरकार हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले तराईको मुद्दा सम्बोधन गरौं भन्दै संसद्मा ल्याउँदा असहयोग गर्ने, मत फेल गराउने एमाले नै हो । केको लोभ देखाएर फोरमलाई सरकारमा ल्याइएको छ, यसले राष्ट्रलाई हित गर्दैन तरार्इ मधेशका जनतालाई निकास दिन सक्दैन।
प्रश्नः नेपाली कांग्रेसभित्र नै देखिएका विभिन्न गुट र नेताहरुको चरित्रलाई तरुण दलको आँखाले कसरी हेरेको छ ?
तरुण दल सधैं पार्टीभित्र एकता हुनुपर्छ पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । पछिल्लो समय पार्टीभित्र विभिन्न समूहहरु खडा गर्ने, गुठहरु बनाउने बढेको स्पष्ट छ । पार्टीभित्र एकता हुनुपर्छ, नेता–नेताबीच वैमनस्यता हुनु हुँदैन । यसले आमजनतालाई भलो गर्दैन, समग्र कांग्रेसलाई हित गर्दैन । आ–आफ्नो एजेन्डा राख्नका लागि छलफल गर्न पाइन्छ, एजेन्डा लागू गर्न खोज्न पाइन्छ । केन्द्रीय समितिभित्र रहेर बृहत बहस गर्न पाइन्छ तर निर्णय सर्वसम्मत रुपमा बाहिर आउनुपर्छ । निर्णय सर्वसम्मत र जनहितको पक्षमा आउन सक्यो भने जनतालाई सकारात्मक संन्देश दिन्छ, पार्टीको एकता बलियो बन्छ । भ्रातृ संगठनहरुले पार्टीले गरेका निर्णयहरु जनतामाझ लैजान्छन् र समग्र देशका नागरिकलाई पार्टीको गतिविधि र यसको भूमिका बारे स्पष्ट बनाउन सकिन्छ । पार्टीभित्रका गुटहरु अन्त्य गर्नु आवश्यक छ र हुन्छ भन्नेमा तरुण दल विश्वस्त छ ।
तरुण दलभित्र पनि महाधिवेशनबाट विभिन्न समूहहरुका साथीहरु आउनुभएको थियो तर हामीहरु एक ढिक्का भएर लागेका छौं, हामीभित्र गुट छैन । तरुण दलको संगठनलाई पार्टीले पनि हेर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ । पार्टीभित्र मात्र होइन यसका अन्य भ्रातृ संगठनबीच पनि गुटहरु देखिएका छन् यो राम्रो काम होइन, यो अन्त्य हुनुपर्छ । तरुण दल पार्टी र अन्य भ्रातृ संगठन एक भएर हिंड्नुपर्छ भनेर दबाब पनि दिएका छौं र दिन्छौं पनि ।
प्रश्नः तरुण दलले आफ्ना गतिविधिलाई सक्रिय रुपमा अघि बढाउन सकेको छैन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यो आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ?
हो, गुनासाहरु बढिरहेका छन्, यसमा हामी पनि सन्तुष्ट छैनौं र स्वयम् म पनि सन्तुष्ट छैन । हामी पोखराको अधिवेशनबाट आयौं, त्यसपछि स्थानीय तहका चुनावको मिति ताकियो, त्यो पनि ३ पटकमा । चुनाव नजिकिएसँगै देशभरमा हामीहरु चुनावी एजेन्डा लिएर गयौं । फरक–फरक मितिमा हुने चुनावले गर्दा लामो समय चुनावी कार्यक्रमहरुमा नै खर्च गर्नुपरयो। स्थानीय चुनाव लगत्तै प्रदेश र केन्द्रको चुनाव नजिकियो, त्यसैको दौडधुपमा देशव्यापी रुपमा लाग्यौं, त्यसले गर्दा पनि संगठनभित्र आफ्ना गतिविधिहरु तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सकेनौं । तराईमा आएको बाढी र डुबानमा हामीले ठूलो सहयोग गरेका छौं । सरकार, एनजिओ, आइएनजिओभन्दा पहिला तरुण दल पुगेर सहयोग गरेको हो । तरुण दलले कसैसँग सहयोग नलिएर आफ्नो संगठनभित्रबाट धेरै ठूलो सहयोग गरेको हो ।
हामीले संगठनभित्र विभिन्न निर्देशनहरु दियौं र संगठनभित्रका गतिविधिहरु सक्रिय बनाउनको लागि सर्कुलेसन गरेका छौं । गतिविधिहरु वितारै अगाडि बढेका छन् । अब जनताले तरुण दलको भूमिकाबारे जानकारी पाउनेछन् । हामी सक्रिय नै छौं । ३ तहका चुनावले गर्दा तरुणदलले नितान्त आफ्ना गतिविधि सक्रिय रुपमा अगाडि बढाउन नसकेको हो । अब यो कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएका छौं । संगठको दृष्टिकोणले हामी अगाडि नै छौं । तरुणदलको स्पष्ट भूमिका छ हामी त्यो पक्षमा उभिन्छौं र गतिविधिहरु पनि सक्रिय रुपमा बढाउँदै लैजान्छौं ।
प्रश्नः देशभरि नै तरुण दलको संगठन कमजोर देखिंदै आएको छ, गतिविधिहरु कमै मात्र सञ्चालन भएका छन् खासमा यस्तो हुनुको कारण के होला ?
पछिल्लो समयमा हाम्रा गतिविधिहरुलाई अगाडि ल्याएका छौं । हामीले फागुन २२, २३ र २४ गते नुवाकोटमा जिल्ला सभापतिहरुको ऐतिहासिक भेला र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरयौं। चैत्र २५ र २६ गते सातैवटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलनहरु गरयौं । हाम्रो अभियानमा पार्टीका नेताहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । एक महिने सात प्रदेशको कार्यक्रमपश्चात वैशाख ५ गते जिल्ला अध्यहरुको भेला जिल्ला–जिल्लामा सम्पन्न गर्दै १२ गते नगर स्तरीय र गाउँपलिका स्तरीय कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेका छौं । हामी केन्द्रदेखि वडा तहसम्म पुगेर संगठनलाई प्रशिक्षण तथा पुनर्जीवन दिने काम गरेका छौं । पछिल्लो समयमा कुनै पनि पार्टीका भ्रातृ संगठनहरु गाउँ–गाउँ गएर आफ्ना गतिविधि गर्न नसकेको अवस्था तरुण दल पुगेको छ । पछिल्लो समय तरुण दल सक्रिय बनेको छ । तरुण दलको जनताको भावना बुझ्ने र जनतालाई तरुण दल एउटा सक्रिय संगठन हो भन्ने बनाएका छौं । अब हामी देशमा भएका विसंगतिविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका प्रशिक्षण कार्यक्रममा दिएका छौं र अधिकांश तरुणहरुका आवाज पनि आएका छन् । अबका दिनमा हामी, भष्ट्राचार, विसंगति, महङ्गी र सरकारले गरेका अराजकतापूर्ण गतिविधिहरुविरुद्ध सक्रियताका साथ आगडि बढ्नेछौं । हाम्रो काम सुशासन र जनतालाई सचेत पार्दै राज्य पक्षबाट भएका गलत कामको खण्डन गर्दै सही काम र देशलाई सही दिशातर्फ लैजान हामी सदैव लाग्नेछौं ।
अर्को कुरा म तरुणदलका सम्पूर्ण साथीहरुलाई भन्न चाहान्छु, हामीले पार्टीलाई माया गरौं । पार्टी भित्रका कुराहरुलाई सक्रियतापूर्वक जनतामाझ लैजाउ । संगठनलाई अझ मजबुत र दरिलो बनाउन खेल्नुपर्ने भूमिका र पक्षहरुमा जोड दिन जरुरी छ त्यसका लागि सक्रियतापूर्वक लागौं । पार्टीलाई थप बलियो बनाएर लैजान सकियो भने पार्टीभित्र रहेका सम्पूर्ण संगठनहरु बलियो बन्दै जान्छन् र तरुणदल पनि सफल हुन सक्दछ ।
प्रश्नः आगामी दिनमा तरुण दललाई कस्तो भूमिका र कुन पक्षमा बढी जोड दिएर लैजाने सोचमा हुनुहुन्छ ?
नेपाली कांगे्रस भनेको हाम्रो मातृ पार्टी हो । उमेर समूहले हेर्दा पार्टी र तरुण दल भनेको एउटा साथी संस्था पनि हौं । गल्ती भएका छन् । पर्टीका गल्ती पनि छन् र तरुणदलका कमीकमजोरी पनि छन् । नेपाली कांग्रेसका एजेन्डाहरु, पार्टीले गरेका राम्रा कामहरु चुनावको बेला जनतामाझ लैजान चुकेकै हौं । तरुणदल भर्खरै मात्र चौथो अधिवेशनबाट आएको थियो । हामीहरु प्रशिक्षित हुन सकेका थिएनौं । देशभर रहेका संगठनभित्रका क्रियाकलापहरु सक्रियताका साथ लैजान सकेका थिएनौं त्यसैले पनि हाम्रो केही भूमिकामा कमजोरी भएकै हो ।
अगामी दिनमा हाम्रो भूमिका पार्टीलाई सफल रुपमा लैजाने र संगठनलाई सुदृढ बनउँदै आगामी दिनमा तरुणदललाई सफल भ्रातृ संगनको रुपमा चिनाउने हो । देशमा व्याप्त भष्ट्राचार र अर्कोतर्फ केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका गतिविधिहरुलाई नियाल्दै गतल कुराहरुलाई खबरदारी गर्ने र सफल रुपमा देश विकासका लागि अगाडि बढाउने तरुण दलको मुख्य भूमिका रहनेछ ।